Bhalisa ingane yakho ngonyaka wokuqala we-GO! Spectrumschool? Ukwenza lokho ngokusebenzisa uhlelo lokubhalisa oluphakathi lwe-Antwerp Secondary Education.
Ingabe ufisa ukubhalisa ingane yakho phakathi no-1e phakathi A noma B? Bese ubhalisa ingane yakho kusukela ngoLwesihlanu 15 Mashi kuya ngoLwesihlanu 05 April 2019 nge http://meldjeaan.antwerpen.be Isikhathi lapho ubhalisa khona ingane yakho ngalesi sikhathi asinethonya ekusakazeni kwezindawo zamahhala. Kufanele unikeze okungenani izikole ezinhlanu. Ungakhohlwa i-GO! I-Spectrumschool ukufaka inombolo ye-1!
Uma ufisa ukubhalisa unyaka ophakeme kune-1e phakathi awukwazi ukusebenzisa i-Meld Je Aan futhi kumele ubhalise ngesikhathi sokubhalisa evamile. Thola lonke ulwazi mayelana nokubhalisa esikoleni sethu kithi ikhasi lokuxhumana.
NgoLwesithathu 13 Januwari kuya ku-27 February 2019: Ukubhalisa abazalwane, odade abafundi kanye nezingane zabasebenzi. Lesi yisikhathi sokuqala kubazalwane, odade nabantwana bomsebenzi.
ULwesihlanu 15 Mashi kuya ku-05 April 2019: Isikhathi sokubhalisa jikelele sephakathi kwe-1e.
Ngakamuva ngoMsombuluko 06 May 2019 uzothola i-imeyili echaza ukuthi ungabhalisa ingane yakho. Qaphela, lokhu akukakabi isiqinisekiso sokubhaliswa! Usadingeka ukuqeda isikole sokubhalisa.
ULwesihlanu 10 May kuya ku-04 Juni 2019: Isikhathi sokubhalisa. Ungabhalisa indodana / indodakazi yakho esikoleni sethu. Ungakhohlwa ukwenza lokhu ngaphakathi kwalesi sikhathi, ngaphandle kwalokho uzolahlekelwa yindawo. Thola lonke ulwazi mayelana nokubhalisa esikoleni sethu kithi ikhasi lokuxhumana.
Kusuka ku-04 Juni 2019: ukuqala kwesikhathi sokubhalisa samahhala.
Kusuka ku-04 Juni ukuya ku-07 Okthoba 2019: Izithuba, ngoba abantu ababhalisile, babelwe abantu ohlwini lokulinda.
Zizwa ukhululekile ukulahla esikoleni sethu. Siyajabula ukukusiza. Yenza i-aphoyintimenti ngeposi noma ngocingo:
campus Ruggeveld: ngocingo kwinombolo 03 / 328 05 00 noma nge-intanethi info@spectrumschool.be
campus uPlantin: ngocingo kwinombolo 03 / 217 43 40 noma nge-intanethi plantijn@spectrumschool.be